कोरोना भाइरसले बलात्कारबाट जोगायो ! « Khabarhub
कोरोना भाइरसले बलात्कारबाट जोगायो !
हामीले कोरोना भाइरसले धेरै मानिसहरुको मृत्यु भएको समाचार त सुन्दै र पढ्दै आएका छौं । तर, कोरोना भाइरसले चीनमा बलात्कारको घटना हुनबाट जोगाएको छ ।
चीनमा बलात्कारको शिकार हुन लागेकी एकजना स्वस्थ युवतीले आफूलाई कोरोना भाइरस लागेको अभिनय गरी सम्भावित बलात्कारबाट जोगिएको डेलिमेलले समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रहरीका अनुसार ती युवती घरमा एक्लै बसिरहेको बेलामा एकजना आएर बलात्कार गर्न खोजेका थिए । तर, उनले चिच्याएर आफू कोरोना भाइरसको महामारीग्रस्त वुहान शहरबाट आएको र स्वविवेकले अरुलाई रोग नसार्नका लागि एक्लै बसेको भनेकी थिइन् ।
तैपनि सम्भावित बलात्कारीले टेरेनन् । उनीमाथि जाइलाग्न थाले । यहीक्रममा ती युवतीले हाच्छ्युँ गरिन् । त्यसपछि कोरोनाभाइरस सर्ने डरले ती सम्भावित बलात्कारीले युवतीसँग भएको ३ हजार ८० युआन लिएर भागेको चिनियाँ प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले बलात्कारको प्रयास गर्ने युवा २५ वर्षे सियाओ रहेको जनाएको छ । घरमा झगडा गरी भागेपछि उनलाई पैसाको अभाव भएको र लुट्ने उद्देश्यले ती युवतीको घरमा प्रवेश गरेको प्रहरीको भनाइ छ । तर, युवतीलाई देखेपछि भने उनले उनीमाथि बलात्कारको प्रयास गरेको थिए ।
घटनालगत्तै प्रहरीले ती युवकको खोजीकार्य थालेपनि शहरभर मानिसहरुले मास्क लगाएका कारण उनलाई भेट्टाउन सकेका थिएनन् । पछि उनका बाबुले नै उनलाई प्रहरी चौकी ल्याएर छाडेका थिए । ती युवाले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरिसकेको र हाल उनी हिरासतमा रहेको जनाइएको छ ।
प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७६, शनिबार ८ : ०५ बजे